Akhriso: 8 Sano iyo Sooyaalka Wadahadaladda Soomaaliya iyo Maamulka Somaliland – Goobjoog News
Somaliland waxaa ay gooni isu taag iskeed ah ku dhawaaqay May 18, 1991, 30 sano kadib ma jiro hal dal oo adduunka ka tirsan oo aqoonsaday, waxaa intaasi barbar socotey in dalka intiisa kale aysan ka jirin wax dowlad Soomaaliyeed ah oo wadahadal la gasho si tabashooyinkooda wax oga qabato. Sidaasi oo ay tahay Somaliland markasta waxa ay diyaar u ahayd in ay miiska wadahadalada soo fariisato, waxayna mar uun sugeysey dowlad rasmi ah oo dalka ka dhalata.
Dhanka, wadahadallada, markii ugu horeysey oo lasoo hadal qaadey wada hadal dhexmara Soomaaliya iyo somaliland waa shirkii caalamiga ahaa ee Soomaaliya loogu qabtay magaalada London 23-kii Feberaayo, 2012-kii. Mid ka mid ah qodobadii shirkaasi kasoo baxay ayaa waxa uu dhigayay in beesha caalamka ay aqoonsato, islamarkaasina taageerto muhiimada ay leedahay in wadahadalo ay dhexmaraan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Somaliland.
Ergada Shirka oga qeybgashay Somaliland:
July 11, 2015: Somaliland ayaa ku eedaysay dawladda Federaalka ah ee Soomaaliya in aysan daacad ka ahayn fulinta heshiiskii maamulista hawada ee sandkii hore lagu saxiixay dalka Turkiga.
Wufuud labada dhinac ka socota iyo hay’adda caalamiga ah ee duulista hawada oo ku kulmay Nairobi ayey shirka ka baxeen kooxdii Somalilad kaddib markii ay sheegeen in shirkaasi lagu soo bandhigay qabya qoraal aan waafaqsanayn heshiiskii Turkiga.
October-21-2015- Wasiirka Wasaaradda Duulista Hawada iyo Gaadiidka Cirka Somaliland Maxamuud Xaashi Cabdi,ayaa ka war bixiyay shir afar geesood ah oo ay kaga qayb galeen dalka Turkiga isla markaana lagaga wada hadlayay hawada Somaliland iyo Soomaaliya.
Shirka oo ay ka soo qayb galeen Masuuliyiin ka kala socda dalalka Somaliland iyo Soomaaliya, Madax ka socota Hay’adda Duulimaadyada u qaabilsan Qaramada Midoobay ICAO. Iyo Madax ka tirsan Dawladda Turkiga, shirkaas wax badan kama soo bixin.
July 17, 2019: Madaxweyne Farmaajo ayaa magacaabay guddi qaran oo hoggaamiyaha wada haddallada lala galayo Somaliland, Madaxwaynaha ayaa u magacaabay Xildhibaan Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Guddoomiyaha Guddigan, halka Mudane Cabdiraxmaan Cabdi Xuseen (Guulwade) uu u magacaabay Guddoomiye Ku Xigeenka, xubanaha kale ee Guddiga ayaa ah:
Dr. Cabdiraxmaan Macallin Cabdullaahi (Baadiyow), Dr.Cali Siciid Fiqi, Sarreeye Guuto Axmed Jaamac Muuse iyo Xildhibaan Cali Axmed Jaamac (Jangeli)
In ay hoggaamiyaan, kuna metalaan Dowladda Federaalka wadahadallada Soomaaliland.
In ay diyaariyaan cilmi-baaris tafaftiran oo ku saabsan dhinacyada sharciga, siyaasadda, taariikhda, dhaqan-dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada ee ku aaddan wadahadalladan.
In ay talo bixin joogta ah ka siiyaan Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya geeddi socodka wadahadalladan.
In ay diyaariyaan tubta wadahadallada.
Guddiga waxa ay dhammeystiranayaan hannaankooda qaab dhismeed, iyaga oo awood u leh in ay qortaan khuburo iyo lataliyeyaal.
February 11, 2020: Kulan uu ka shaqeeyey ra’isul wasaare Abiy Axmed ayaa waxaa Adis Ababa ku yeeshay madaxweyneyaasha Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo iyo madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi.
June 14, 2020: Wada hadal ay garwadeen ka yihiin Mareykanka, gogolna u dhigeen Djibouti, goobjoobna ka tahay Itoobiya waxaa caasimadda Djibouti ku yeelanaya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo iyo madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi.
W/Q: Cabdicasis Axmed Gurbiye,